Linux Mint 19.3 Tricia nwere ụdị beta ya | Site na Linux
Linux Mint 19.3 Tricia nwere ụdị beta
Linux Mint Project wepụtara nsụgharị beta nke nkesa ya na-esote taa Linux Mint 19.3 Tricia dị na nsụgharị niile, gụnyere Cinnamon, MATE, na Xfce.
Linux Mint 19.3 Tricia malitere mmepe na mbido ọnwa Septemba ma nwezie ọhaneze beta n'ihu ntọhapụ ya nke ezubere maka ọnwa a, n'oge Krismas.
Ntọhapụ a dabere na nkesa Canonical kachasị ọhụrụ, Ubuntu 18.04.3 LTS Bionic Beaver wee bịa na Linux Kernel 5.0Dị ka Ubuntu 18.04 LTS, ọ ga-enwe nkwado na mmelite nche ruo mgbe 2023.
Mmelite na Linux Mint 19.3 Beta
Ihe mgbakwunye Linux Mint 19.3 Beta gụnyere ngwa ọhụrụ atọ, Okwu dị ka ngwa ntinye akwụkwọ, dochie Tomboy, Ede dochie GIMP na Celluloid dị ka onye nnọchi nke Xplayer.
Maka nsụgharị niile, Linux Mint 19.3 na-agbakwunye nkwado maka HiDPI jiri akara ngosi ka mma na ogwe sistemụ, ọkọlọtọ doro anya na ntọala asụsụ na ngwaọrụ ndị ọzọ, yana nchekwa ihuenyo dị mma na nyocha isiokwu.
E meziwanyela usoro mkpesa maka mbipụta niile ma ugbu a, a na-agbakwunye akara ngosi ọhụrụ na ogwe usoro iji gwa ndị ọrụ na ha kwesịrị ịlele ụfọdụ ihe, na mgbakwunye na nchọpụta akpaka nke nsogbu nwere ike na kọmputa n'ihi enweghị codec ma ọ bụ ndị ọkwọ ụgbọala .
Emelitere ngwa ọrụ asụsụ iji nye ndị ọrụ ohere ịhọrọ usoro oge yana enwere azịza ọhụụ na ogwe sistemụ nke na-eweta nkwado maka akara ngosi gbara ọchịchịrị na nke ọkụ, nkwado maka ọtụtụ menus, menus ala na ihe ndị ọzọ.
Linux Mint 19.3 Cinnamon, MATE, na Xfce na Cinnamon 4.4, MATE 1.22, na Xfce 4.14. Nwere ike ibudata nsụgharị beta na akwukwọ ọrụ nke nkesa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Linux Mint 19.3 Tricia nwere ụdị beta
A tọhapụrụla ụdị ọhụrụ nke Firefox 71. Mara ozi ọma ya na otu esi etinye ya na Linux?